Annaga nagu saabsan - Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.
Xaruntayadu waxa ay ku fadhidaa in ka badan 700,000㎡, waxa uu leeyahay 6 aqoon-is-weydaarsiyo habaysan oo ay ku jiraan xarunta R&D oo la casriyeeyay iyotas-hiilaadka wax-soo-saarka caqliga leh ee habka wax-soo-saarka weyn sida shaambadaha, alxanka, rinjiyeynta, isu-ururinta, si loo hubiyo tayada wax-soo-saarka iyo awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah ee 200,000 oo qaybood sannadkii.Iyadoo koox khibrad iyo xirfad leh, 20 R&D injineero, 15 Q&A injineerada, 30 injineerada adeegga iyo 200 oo shaqaale ah, baabuurteena korontadu waxay noqon karaan kuwo u qalma oo laga iibin karo adduunka oo dhan.Waqtigan xaadirka ah, waxaan diirada saareynaa gawaarida rakaabka ah ee koronto wadista masaafo gaaban, safar maalinle ah si loo yareeyo qiiqa kaarboonka, iyo baabuurta gaadiidka xamuulka korantada ee xalka ugu dambeeya ee isticmaalka ganacsiga, gaarsiinta ama saadka, si loo badbaadiyo qiimaha shaqada iyo isticmaalka saliida.
Yunlong E-cars ayaa si guul leh u soo galay suuqyada caalamiga ah oo leh tayo aad u fiican iyo waxqabadka, oo lagu daray adeegga iibka ka dib, waxaan ku guuleysanay ammaan aad u sareysa macaamiisha, waxay ka yimaadaan in ka badan 30 waddan oo adduunka ah, sida Germany, Denmark, Sweden, Finland, France, Poland, Czech, Netherlands, Italy, Russia, Ukraine, Japan iyo South Korea iwm. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa in ay idinla shaqayn doonaan mustaqbalka fog ganacsiga guul-guud.
Sahaminta Tiknoolajiyada Cusub, Warshadaha Cusub, hidde-side horumarineed oo gaar ah ayaa si tartiib tartiib ah loo sameeyay, dardargelinta isbeddelka ka imanaya shirkad wax soo saar ah oo u beddelaya adeeg wax soo saar iyo shirkad hal-abuurnimo tignoolajiyadeed, taasoo horseed u ah isbeddelka iyo cusboonaysiinta warshadaha tamarta tamarta cusub ee baabuurta korantada oo leh hal-abuur tignoolajiyadeed.
Dhaqanka shirkadeed ee Yunlong wuxuu saameyn weyn ku leeyahay mustaqbalka iyo horumarka shirkadda.Himiladayadu waa in aan koronto noloshaada eco, samayno adduun eco ah.Hadafkayagu waa inaan sii wadno hagaajinta, raacno oo buuxino dalabkaaga.Qiimayaashayada xudunta u ah waa daacadnimo, hal-abuurnimo, iskaashi.
Faahfaahin dheeraad ah oo nagu saabsan, pls waxaad xor u tahay inaad siiso tallaal wakhti kasta.
Aragtida: Korantada noloshaada deegaankaaga, samee adduun eco
Hadafka: Sii wad horumarinta, raac oo buuxi baahidaada.
Qiimaha: Daacadnimo, Hal-abuurnimo, Wadashaqeyn.
Waxaan ku jirnaa liiska MIIT ee Shiinaha, waxaanu leenahay shahaadada naqshadeynta iyo soo saarista baabuurta korontada ku shaqeysa oo waxaan heli karnaa diiwaangelinta&taarigga shatiga
Iibinta Xirfadlayaasha iyo Adeegga Iibka Kadib.
Waxaan siinaa macaamiisheena qiimaha leh oo leh adeegga iibka kahor iyo iibka kadib.